နှုတ်ကပတ်တော်၌ပုံရိပ်တွေကိုရွှေ့ဖို့ကိုဘယ်လို - စကားလုံး - 2019
က MS နှုတ်ကပတ်တော်၌ဓာတ်ပုံများကို Moving
မကြာခဏဆိုသလို Microsoft Word ကို image ကိုဖွင့်စာရွက်စာတမ်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်ဖြစ်စေ, တင်းကြပ်စွာသတ်မှတ်ထားသောအရပျ၌ကိုတင်ပြမပေးသင့်ပါတယ်။ အကျိုးဆက် image ကိုသင်ရွှေ့ချင်, ဤအများစုကိစ္စများတွင်, ရိုးရှင်းစွာတပ်မက်လိုချင်သောအဦးတည်လက်ဝဲ mouse ကိုခလုတ်ဆွဲ။
သင်ခန်းစာ: နှုတ်ကပတ်တော်၌ Edit ကိုပုံရိပ်များ
အများဆုံးထဲမှာအမြဲကြောင်းကိုမဆိုလိုပါ ... တစ်ဦးစာရွက်စာတမ်းပုံရိပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အချို့သောစာသား, ပါရှိသည်ဆိုလျှင်,a"ကကြမ်းတမ်း" လှုပျရှားမှုပုံစံချပေးနှောင့်အယှက်ပေးနိုင်သည်။ စနစ်တကျနှုတ်ကပတ်တော်၌ image ကိုရွှေ့ဖို့အလို့ငှာ, သင်မှန်ကန်သော layout ကိုရွေးချယ်စရာကောက်သင့်တယ်။
သင်ခန်းစာ: နှုတ်ကပတ်တော်ကို format နဲ့စာသားထဲမှာအဖြစ်
သင်တစ်ဦး Microsoft Word ကိုစာရွက်စာတမ်းတစ်ခု image ကိုထည့်သွင်းဖို့ဘယ်လိုသိမထားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုအသုံးပြုပါ။
Image ကိုက၎င်း၏နယ်နိမိတ်ကိုညွှန်း, အထူးဘောင်ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့တစ်ဦးစာရွက်စာတမ်းမှဆက်ပြောသည်။ ခလုတ်, သင် layout ကိုနဲ့ settings ကိုပြောင်းလဲရန်နိုင်သည့်အတူ - အထက်ညာဖက်မှာခညျြနှောအရာဝတ္ထုနေရာ - အထက်လက်ဝဲဘက်ထောင့်ရှိကျောက်ဆူးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ icon ပေါ်ကလစ်နှိပ်ခြင်း, သင်ကသင့်လျော်သောအဆင်အပြင် option ကိုရွေးနိုင်သည်။
အလားတူအဆိုပါ tab မှာလုပ်ဆောင်နိုင်တယ် "Format ကို"ဘယ်စာရွက်စာတမ်းများတွင်ထည့်သွင်းခြင်းပုံစံပြီးနောက်ဖွင့်လှစ်။ ရိုးရှင်းစွာအရှိကထို option ကိုရွေးပါ "စာသားထုပ်ပိုးပြီး".
မှတ်ချက်: "စာသားထုပ်ပိုးပြီး" - ဤသူသည်သင်တို့အသိဥာဏ်စာသား document တစ်ခုရုပ်ပုံထည့်သွင်းခွင့်ပြုသောအဓိက parameter သည်ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ပြဿနာပါလျှင် - ပဲအလွတ်စာမျက်နှာ image ကိုရွှေ့, နှင့်လှပစာသားအရပ်၌စာရွက်စာတမ်းအတွက်မှန်ကန်စွာနေရာချမပေး, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါးဖတ်ရှုဖို့သေချာပါစေ။
ထိုမှတပါး, သငျသညျကျေနပ်မှုမဟုတ်စံ layout ကိုရွေးချယ်စရာလျှင်, Menu ခလုတ်ကို "စာသားထုပ်ပိုးပြီး" သငျသညျရှေးခယျြနိုငျ "အဆင့်မြင့်ချိန်ညှိမှုများ markup" အဲဒီမှာလိုအပ်သောအပြင်အဆင်များပါစေ။
parameters တွေကို "စာသားကိုနှင့်အတူ Move" နှင့် "စာမကျြနှာပျေါတှငျအနေအထား Fix" သူတို့ကသူတို့ကိုယ်သူတို့အဘို့ဟောပြောလော့။ ပထမဦးဆုံးပုံရိပ်ရွေးချယ်ခြင်းဘယ်အချိန်မှာသင်တန်း၏, ပြောင်းလဲဖြည့်ဆည်းနိုင်သည့်, စာရွက်စာတမ်း၏စာသားအကြောင်းအရာနှင့်ရွှေ့မည်။ ဒုတိယခုနှစ်တွင် - image ကိုအဘယ်သူမျှမကစာသားနှင့်စာရွက်စာတမ်းတွင်ပါရှိသောအခြားမည်သည့်အရာဝတ္ထုရှိကွောငျးစာရွက်စာတမ်းအတွက်အထူးသဖြင့်တည်နေရာအတွက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
parameters များကိုရွေးချယ်ခြင်း "စာသား»များအတွက် သို့မဟုတ် "မဖြစ်မီကစာသား"သင်တို့သည်လွတ်လပ်စွာစာသားနှင့်၎င်း၏အနေအထားကိုထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲ, စာရွက်စာတမ်းပေါ်တွင်ပုံရိပ်ရွှေ့နိုင်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအမှု၌, စာသားဒုတိယပုံရဲ့ထိပ်ပေါ်မှာနေဖို့ပါလိမ့်မယ် - သူ့နောက်မှာ။ လိုအပ်မယ်ဆိုရင်သင်အမြဲပုံ၏ opacity ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။
သင်တစ်ဦးတင်းကြပ်စွာဒေါင်လိုက်သို့မဟုတ်အလျားလိုက်ဦးတည်ချက်အတွက် image ကိုရွှေ့ဖို့လိုအပ်လျှင်, ဆင်းကိုင် « SHIFT » နှင့်တပ်မက်လိုချင်သောအဦးတည်မောက်နှင့်အတူကဆွဲထုတ်။
, အသေးစားခြေလှမ်းများအတွက် image ကိုရွှေ့မောက်နှင့်အတူကအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ, အဆင်းကျင်းပရန် « CTRL » နှင့်မြှားသော့ကို အသုံးပြု. အရာဝတ္ထုရွှေ့။
လိုအပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုသုံး image ကိုလှည့်။
ဆိုလိုသည်မှာယခုသင် Microsoft Word ကို image ကိုရွှေ့ဖို့ဘယ်လိုသိသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအစီအစဉ်၏ဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာစူးစမ်းဖို့ Continue, ကြှနျုပျတို့လွယ်ကူသငျသညျကို process ရန်အဘို့အစေရန်တတ်နိုင်သမျှအရာအားလုံးပြုလိမ့်မည်။